गोलो अनुहार प्यारा तानाबे रेइको जापानी केटी १०० सीएम फ्लैट चेस्ट टीपीई सेक्स डल्स
टीपीई सेक्स डल्स,फ्ल्याट चेस्टेड यौन पुत्री,एक कप सेक्स पुतली,२०१ best सब भन्दा राम्रो बिक्री १०० सेमी -१cm० सेमी गुडिया,स्लिम सेक्स डॉलहरू,प्रेम गुडाहरू
जापानी केटी तानाबे रिको टीपीई सेक्स डल १०० सीएम फ्लैट चेस्ट मिनी सेक्स डल राउन्ड अनुहार
41 सेव%$ 698.50$ 1,169.01
शरारती, जीवन्त, प्यारा
रग्डोल, टोय, लुकाउनुहोस् र खोजी गर्नुहोस्
भीडका लागि उपयुक्त:
महान बुबा, एक्लोपना, प्रेम खोज्दै
तनाबेको पृष्ठभूमि कथा
तनाबेलाई इन्द्रेणीहरू, बिरालोहरू र पपकोर्न मन पर्छ। उनी विशेष गरी युवा, ताजा र स्लिम हुन डिजाइन गरिएको छ, तर वास्तविक स्वाद र कामुकताको साथ। उनी उनीहरूका लागि उपयुक्त छन् जो सेक्सी तर अझै निर्दोष कानुनी गुड़िया खोज्दैछन्। उनी सबै उमेरका लागि उपयुक्त छ र उनको यौन झुकाव खोजी गर्न तयार छ। उसलाई घरमा लैजानुहोस् र उसलाई तपाईंको शयनकक्षमा लैजानुहोस्!
उसको आँखा चम्किरहेको छ; उनी तिमीसँग खेल्न चाहन्छिन। यदि तपाईंसँग अन्य इच्छाहरू वा प्राथमिकताहरू छन्, तपाईं विभिन्न सामानहरू पुतली पूरक गर्न र केही विवरणहरू अनुकूलित गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। उनी हाम्रो मिनी सेक्स पुतली हुन्, तर यती सानो प्याकेजमा पनि उनी एक महिला हुन्।
यदि तपाईं तनाबेको बारेमा अधिक जान्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं उनको प्रोफाइल संग्रह वा ग्राहक समीक्षा पढ्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् कसरी मानिसहरूले Tanane खरीद उनको मूल्यांकन। उनी धेरै प्यारी सानो सेक्स पुत्री हो। उनी वफादार, इमान्दार र सनकी छिन्, सायद अलि धेरै अलमल्ल पनि छ। उनी छिट्टै तपाईंले चाहानु भएको साथी बन्नेछिन्। तर चीजहरू चाँडै परिवर्तन हुन सक्छ; उनको सपना संसारभर यात्रा गर्नु हो। उनीलाई लाग्छ कि संसारमा धेरै अनुभव छ। भाग्यवस, उनले तपाईंलाई भेटिन्, के तपाईं उनको सपना साकार गर्न मद्दत गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ?
तपाईं कोठामा उनलाई खोज्दै हुनुहुन्छ। Tanabe तपाईं उनको लागि किन्नुभएको खेलौना खेल्दै छ। यस बखत, तपाईं उनको पछि हिंड्नुभयो, भुइँमा घुँडा टेक्नुभयो, कम्मर वरिपरि हतियारहरू। ऊ अलि डराएको हिरण जस्तै छ। तर चाँडै उनी शान्त भइन्। "के तपाइँ निश्चय हुनुहुन्छ कि तपाइँ यो गर्न चाहानुहुन्छ?" उनले उनको कानमा सोधिन्। "चिन्तित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। यदि कुनै समयमा तपाईलाई के भएको मनपर्दैन भने, तपाई मलाई रोक्न भन्नुहोस् र म रोकिदिन्छु। उनी तपाईको छातीमा उभिन अति नै उत्सुक छिन्। उनले यसभन्दा अघि कहिल्यै प्रयास गरेकी छैनन्, तर उनी धेरै छिन् जिज्ञासु। यस बिन्दुमा, उनले बिस्तारै उनको सेता अंडरवियर प्रकट गर्न उनको छोटो स्कर्ट लिनुभयो। तपाईंको मुटु मुस्कुराउँदै छ; यो तपाईंको मनपर्ने सूट हो। तपाईले सहयोग गर्न सक्नुहुन्न तर उनको गुलाबी ओठहरू चुम्बन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको कोट। उनको स्तनहरू एकदम सानो छन् तर धेरै आकर्षक उनी थरथर काँप्छिन्; यो ना bare्गो, उजागर र बाध्य छ, र यो एकदम नयाँ अनुभव हो।
उनी सानो पुतली छिन्। यद्यपि उनले प्रेमको अनुभव गरेकी छैनन्, उनको चाहना एकदम प्रबल छ। के तपाईं यस प्रियको साथ परिवार बनाउन चाहानुहुन्छ? उनी सुन्दर प्रेमको प्रतीक्षामा छिन्। तिमी केको लागि पर्खिरहेका छौ? उसलाई घर लैजाऊ। तपाईको मिठाईमा बस्नुहोस्।
१.तनाबे हाम्रो स्टोरमा २०२० को सबैभन्दा बेच्ने शैली हो।
२. उनी धेरै हलुका छन्, त्यसैले तपाईं उनलाई कुनै पनि स्थानमा सार्न सक्नुहुन्छ।
He. उनीसँग सुन्दर अनुहार छ र तपाईंको सबै कल्पनाहरू भेट्दछ।
H. उनको शरीर स and्ग्रह र भण्डारणको लागि सानो र सुविधाजनक छ।
H. उनको भित्री भागमा धातुको कंकालले हिin्ग गरेको छ जुन तपाइँले चाहानु भएको स्थितिमा पोष्ट गर्न अनुमति दिन्छ।
तनाबेको प्याकिंग सूची:
उचाई Inches 39.4 इन्च (१100१ सेमी)
तौल ,,28.7० एलबीएस (२,१13० किलो)
बस्ट ： Inches 23.6 इन्च (१60१ सेमी)
कम्मर Inches 14.2 इन्च (१36१ सेमी)
हिप्स ： Inches 23.6 इन्च (१60१ सेमी)
प्याकेजिङ्ग साइज: 38.6*11.9*9.5 inches(98*30*24cm)
गुलाबी साना स्तनहरू Asao Miko 100CM TPE Doll Flat Chest Comite
व्यक्तिगत प्रोफाइल नाम: Asao Miko लिंग: महिला कामुकता: मजबूत चरित्र: जीवन्त, निर्दोष, दयालु शौक: इलेक्ट्रोनिक खेल, मेकअप, प्रेम बनाउने पेशा: विद्यार्थी नागरिकता: जापानी भीडको लागि उपयुक्त: संग्रह, फोटोग्राफी, पार्ट ...
फ्लैट छाती कालो ठूला आँखें जापानी केटी अकुमी हकुमी १०० सेमी टीपीई एस ...
व्यक्तिगत प्रोफाइल नाम: अकुमी हाकुमी लिender्ग: महिला लैंगिकता: मध्यम चरित्र: निर्दोष, जीवन्त, सरल शौकहरू: सानो जनावर, खरायो, English पेशा: विद्यार्थी राष्ट्रियता: जापानी भीडको लागि उपयुक्त: छोरीहरू, साझेदारहरूको खोजी गर्दै ...
प्यारा जून डोएल १०० सीएम कालो ठूलो आँखा खैरो लामो कपाल फ्लैस्ट छाती ...
जुनको पृष्ठभूमि कथा: उनी तपाईंको निर्दोष, मायालु विद्यार्थी हुनेछिन, त्यसैले उनलाई सबै जटिल लिंगको सिकाउनुहोस्। फिक्का छाला र गाढा सीधा कपाल, उनी उनको कपडामा धेरै निर्दोष देखिन्छन्, तर जब तपाईं उसलाई बाहिर लैजानुहुन्छ, यो पूर्ण रूपमा दोषी हुन्छ। यद्यपि उनी पक्कै पनि एन्ट्री-लेभल सेक्स पुत्री हो, नसोच्नुहोस् ...
XiaoQi - आकर्षक ठूला स्तनहरू योनी गुद्वार दुई प्वालहरू नयाँ शरीर TP ...
हारुका - १C० सीएम सानो चेस्ट स्लिम लजालु TPE सेक्स डॉल
हारुका पृष्ठभूमि कथा: म एक सुपर शरारती केटी हुँ, म यस्तो मान्छे खोज्दै छु जसले मेरो विचित्रको भावनात्मक सपनाहरू सन्तुष्ट पार्न सक्छ। तिनीहरूले भने कि म निर्दोष देखिन्छु, तर म तपाईंलाई आश्वसन दिन्छु कि मेरो यौन ज्ञान तपाईंको अधिकतम कल्पनाशक्ति बाहिर छ! मलाई रोल प्ले गर्ने र शरारती पोशाक मन पर्छ। मलाई घर लैजानुहोस्, मलाई दिनुहोस् ...